Dị n'otu na-enweta ụlọ ọrụ Spanish Códice Software | Site na Linux
Dị n'otu na-enweta ụlọ ọrụ Spanish Códice Software
Isaac | | Noticias, Mmemme
Techdị n'otu Teknụzụ, Onye Mmepụta nke ama 3D ihe osise nke ihe osise (ka aghara iju ya anya Shedị n'Otu), emeela nnweta ịmata. Ndi zụtara si ụlọ ọrụ Spanish Códice Software. Agbanyeghị, amatabeghị nkọwa ọ bụla gbasara ihe nnweta a, yabụ na ọ gaghị ekwe omume ikwu ọnụ ọgụgụ dịka ọ dị na ndị ọzọ. Ọ pụtawo na mkparịta ụka ahụ amalitela ọnwa ole na ole gara aga iji nweta nkwekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ abụọ ahụ.
Ihe anyị maara bụ na ịzụta agaghị egosi mgbanwe maka ngwaahịa Unity ma ọ bụ maka onye ama ama Plastic SCM nke ụlọ ọrụ Códice Software mara. Ọ bụrụ na ịmaghị ya, ọ bụ ngwanrọ mepụtara na Valladolid na ejiri ya dị ka njikwa mbipute (VCS), dịka ihe ọzọ na Git.
Nnweta a ga-ekwe ka ịdị n'otu na nnukwu ìgwè ndị mmepe nwere ike iji ike nke a VCS n'elu ikpo okwu dị ka ị ga-esi na-emeziwanye ihe ngosi Unity 3D maka igwe vidiyo vidiyo n'ọdịnihu na-adabere na ya. Plastic SCM n'onwe ya ga - etokọ na Unity, yabụ ọ ga - abụrịrị uru bara uru.
Site n'ụzọ, Unity Technologies nwere ụdịrị ikpo okwu a na-akpọ Na-arụkọ ọrụ ọnụ, ma a gaghị enwe mgbanwe na ya. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala na Denmark (ma dabere na Silicon Valley) si kwuo, ha ga-anọgide na-akwado ya. Ma ezubere ya iji jikwaa obere ìgwè, ma ugbu a, Plastic SCM ga-enwe ike ịhapụ ọrụ achikota nke ndị otu buru ibu iji nweta ọrụ dị mgbagwoju anya.
La SARS-CoV-2 oria ojoon'ezie, abụwokwa ụta so n'ihe ụfọdụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbanwe ụzọ ị si arụ ọrụ. Ma ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ, ọrụ telivishọn amụbaala. Maka nke a, ọtụtụ otu ndị ọzọ na - arụ ọrụ nke ọma, yabụ Plastic SCM sitere na Códice Software ga - enye ohere ka mma na nke a.
More banyere Unitydị n'Otu
Ozi ndi ozo banyere Plastic SCM
Ozi ndi ozo banyere Códice Software
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Dị n'otu na-enweta ụlọ ọrụ Spanish Códice Software
Fluxbox, FLWM, FVWM, Haze, na Herbstluftwm: WM ndị ọzọ maka Linux
Hacking na Pentesting: Mee ka GNU / Linux Distro gị gaa na mpaghara IT a